Ogaden News Agency (ONA) – Habeenkii Ogadenya iyo Koonfur Afrika
Habeenkii Ogadenya iyo Koonfur Afrika
Posted by ONA Admin	/ May 29, 2011
Waxaa gaaroonka diyaaradaha ee caalamiga ahee magaalada Port Elizabeth kasoo dagay si wayna loogu soo dhaweeyay xoghaya wadanak Koonfur Afrika ee Ururka Ardayda iyo dhalainyarada Ogadenya OYSU mudane Huud Sheekh Madri iyo hogaanak warfaafinta iyo abaabulka ee ururka OYSU heer caalam mudane Cumar Sheekh Cabdulahi.
Waftigan oo xarunta jaaliyada S.Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika iyo maamul goboleedka ururka dhalinyarada ay si heer sare ah ugu soo dhaweeyeen garoonka ayaa waxaa kulamo isdaba jooga la yeeshay maamulka jaaliyda iyo maamulka gobolak ee ururka OYSU ee Eastern Cape.
Sababta socdaalak waftida ayaa ahayd sidii loo xusi lahaa OGADEN NIGHT oo 25ka bisha laga xusay magaalada Johannesburg ayadoo la filayo in Port Elizabeth laga xusi doono 30ka bisha halka magalada Cape Town bisha lixaad lagu xusi doono.
Waxaa bisha 30keeda lagu daawan doona HABEENKA OGAADEENIYA hall-ka weyn ee Korsten saacaddu marka ay tahay 6:00 – 12:00PM halkaasoo lagu soo bandhigi doono riwaayadii Hagar-daamo Gumaysi Halgamaa Wax-mayeesho. Qiimaha lagu galayo waa R100.00.
Qayb ka noqo xuska Habeenka Ogadeenya oo ha moogaanin.